Nagarik News - हट पोज, अवसर खोज
होमपेज / शुक्रबार / हट पोज, अवसर खोज
हट पोज, अवसर खोज	28 Apr 2013 आइतबार १५ बैशाख, २०७०
मनोज घर्तीमगर Be the first to comment! 12345 (8 votes)
तस्बिर : विजय गुरुङ
गर्मी बढिरहेको छ। युवतीका पहिरन खुल्दै र छोट्टिँदै गएका छन्। फेशनको शहर भनिने पोखरामा यतिबेला खुला पहिरनमा हट फोटो सेसन गर्नेहरू बढेका छन्। तालमा होस् वा स्विमिङ पुलमा, डाँडामा होस् वा चौरमा, गर्मी झल्काउने पहिरनमा युवतीहरूको फोटो खिच्न ग्ल्यामर फोटोग्राफर व्यस्त छन्। मोडलिङको बढ्दो चहलपहलले फेशनेबल युवतीहरू फोटो सेसनप्रति निकै आकर्षित छन्। यो मौसममा फेवाताल तथा स्विमिङ पुलमा फोटो सेसन गर्नेहरू बढी छन्। तस्बिर हेरेरै फिल्मदेखि म्युजिक भिडियोमा अफर आउने लहरले युवतीहरूलाई फोटो सेसन गर्न उक्साएको छ। ग्ल्यामरस फोटा सेसन गर्न युवायुवतीबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। अझ युवतीमाझ 'उसले भन्दा हट पोज मैले किन नदिने?' भन्ने मानसिकता बन्दै गइरहेको छ। 'मोडलिङलाई करिअर बनाउन यो एउटा खुड्किलो भएकाले पनि मैले फोटो सुट गर्ने गरेको हुँ,' मोडल दीपा कार्की भन्छिन्, 'ग्ल्यामरको होडबाजी छ। कोभन्दा को कम भएकाले ग्ल्यामरस पोज त दिनैपर्‍यो नि।' फोटो सेसन मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्न चाहनेका लागि पहिलो खुट्किलो बनेको छ। नयाँ–नयाँ अनुहार ग्ल्यामरस पोज दिन निकै आतुर छन्। चिटिक्क परेको बडी फिगर र क्षमता भएकालाई यस क्षेत्रमा अवसर पनि छन्। फोटोजेनिक अनुहारको बजार पनि राम्रै छ। उनीहरूले फिल्म, म्युजिक भिडियो, विज्ञापन आदिमा अभिनय तथा मोडलिङ गर्ने अवसर धमाधम पाउन थालेका छन्। त्यसैले फोटो सेसनप्रति युवतीहरू आकर्षित छन्। 'एक्सपोज नभएपछि को मोडल कस्तो छ, थाहै हुँदैन,' मोडल सपना गुरुङ भन्छिन्, 'पत्रिका वा वेबसाइटका लागि फोटो सेसन गर्नैपर्छ। अझ ग्ल्यामरस पोजमा त सबैका आँखा परिहाल्छन्।' केही वर्षपहिले पोखराको एक वेबसाइटमा फोटो सेसन गराएपछि उनलाई चिन्नेहरू निकै छन्। त्यसपछि उनले थुप्रै म्युजिक भिडियो, फिल्ममा समेत अभिनय र मोडलिङ गरिसकेकी छिन्। अवसर पाइने र लोकप्रिय हुने भएपछि मोडलिङको संसारमा रमाउन चाहने युवती बढेका छन्। फोटो सेसनपछि नै मोडलहरूले विभिन्न अवसर पाउने गरेका छन्। उनीहरूका रहर पूरा गर्ने काम गरेका छन्, पोखराका फेसन वेबसाइट र ग्ल्यामर फोटोग्राफरहरूले। जक्सन डट कम, पोखरासिटी डट कम, लभ्ली पोखरा डट कम, कस्तो रमाइलो डट कम, पोखराफेस डट कम, ठीकठाक डट कम, रमाइलो पोखरा डट कम, मस्ती छ डट कम, पोखरा टुडे डट कम आदि साइटहरू मोडलको फोटो सेसन गरेर नै चर्चामा आएका हुन्। 'गर्मीमा फाटो सेसन गराउन आउनेहरूको भीड बढेको छ,' जक्सन डट कमका फोटोग्राफर भूपालकुमार गुरुङ भन्छन्, 'युवतीहरू मोडलिङसँगै म्युजिक भिडियो र फिल्ममा अवसर खोज्न फोटो सेसन गराउँछन्।'केही युवतीले भने सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै तस्बिर खिचाएको पाइन्छ। मोडलिङमै जम्छु भन्ने सोच उनीहरूमा कमै हुन्छ। फोटो सेसन गर्नेहरूले कामुकतालाई पनि बढी जोड दिएको पाइन्छ। वेबसाइटहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न फोटो सेसन गराउन दौडधूप बढी गर्ने गरेका छन्। 'सबैको ध्यान मोडलमै पर्छ, त्यसैले होला आजभोलि फोटो सेसनको प्रतिस्पर्धा छ,' पोखरासिटी डट कमका फोटोग्राफर रवि श्रेष्ठ भन्छन्, 'केही युवती भने लोकप्रियता र रहरले फोटो सेसन गराउँछन्।' Tweet Leaveacomment Message *
व्यङ्य : मोर्चा बलराजनीतिक दलका सामर्थ्य र ताकत भनेका जनता जनार्दन हुन्। यो सार्वभौम यथार्थ हो। तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो यथार्थ खासै मिल्दोजुल्दो देखिँदैन।	'इम्पोर्टेड फ्रेन्ड'बलिउड अभिनेता–अभिनेत्रीका नाम बेला–बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्टारसँग जोडिइरहन्छ। बलिउड अभिनेत्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभिनेतालाई कहिले ब्वाइफ्रेन्डका रूपमा स्विकार्छन् त कहिले साथीका रूपमा मिडियासामु परिचित गराउँछिन्।	आत्मसमर्पणवादी 'कलिउड'कुनै मान्छे, ठाउँ वा चिजको नाम जुराउन 'कुण्डली' केलाइन्छ। मौलिक पहिचान उजागर गर्ने र तर्कसंगत लाग्ने नाम नै रोजिन्छ। तर, नेपाली फिल्मलाई चिनाउन अनौपचारिक रूपमा प्रयोग गरिने शब्द 'कलिउड'ले न...	विदेशिए पाँच लाख नेपालीआर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कामको खोजीमा ५ लाख २७ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार विदेशिएका छन्। सरकारले रोजगारीका लागि खुला गरेको १ सय ९ मुलुक (भारतबाहेक) र व्यक्तिगत रुपमा अरू ४५...	'जिन्दगीमा के चाहिँ गरिएन, हैट!'उनले भन्ने 'हैट' अहिले 'सुपरहिट' छ। अभिनेता बुद्धि तामाङ अहिले फिल्म 'कबड्डी कबड्डी'को चर्चाको तापमा छन्। जीवनमा उनले धेरै दुःख गरेका छन्। इँटा पार्नेदेखि पत्रिका बेच्नेसम्म काम गरेका छन्। बदामदेखि...	श्रेयसीलाई जिताउन अभियानगायिका श्रेयसी चेम्जोङलाई विन्ध्यवासिनी म्युजिक अवार्ड जिताउन पूर्वमा अभियान सुरु गरिएको छ। अवार्डको बेस्ट फिमेल सिंगरको उत्कृष्ट पाँचमा परेकी श्रेयसीलाई जिताउन गत तिहारदेखि अभियान थालेका पूर्वेलीहरूले पूर्वका विभिन्न ठाउँमा एकल...	'दिल खोलेर रम्ने हो'बोझ, थकान र तनाव भागदौडपूर्ण जीवनका अनिवार्य हिस्सा भइसकेका छन्। शहरमा बाँच्नका लागि यसको तेज रफ्तारलाई समाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सूर्याेदयदेखि सूर्यास्तसम्म व्यस्त रहनुपर्छ। अन्यथा, व्यक्तिका आवश्यकताहरू पूरा हुँदैनन्।	सबै लेखक जोगी हुन् : ईश्वर कँडेल, आख्यानकारचितवन बसेर लेखनकर्म गरिरहेका कवि/आख्यानकार ईश्वर कँडेलको जीवनशैली फकिरको जस्तो छ। उनी मनमौजी पाराले घुमिहिँड्छन्। घुम्नकै लागि भर्खरै यिनले अध्यापन पेशा पनि छोडेका छन्। अंग्रेजी भाषामा लेख्ने कँडेलको भर्खरै 'इकोज'...	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...